SomaliTalk.com » 2011 » July » 12
Home » Archive Maalinta July 12th, 2011
OGEYSIIS:walaalayaal interview-gan wuxuu ku saabsan yahay Mutamarka kadhici doona Wadanka UK
Walaal waxaan halkan kuugu soo lifaaqay leaflet ku saabsan mu’tamar iyo kulan aad u ballaaran oo ay soo qabanqaabisay dalladda masaajidda iyo maraakizta Somaaliyeed ee UK.Mu’tamarku wuxuu si talantaalli ah uga dhacayaa London, Birmingham iyo Bristall, wuxuuna ku aaddanyahay maalmaha; 22, 23, 24 iyo 25 July. Leafletka ayay ku caddahay maalin walba iyo meesha. Waxaan ku cazumnay oo mu’tamarka...
Ururka INISKOY oo Siminaar u qabtey Haweenka ku Ganacsada Wadooyinka Muqdisho.
Ururka Nabadda iyo Dimoqaraadiyada ee (Iniskoy Peace and Democracy Organization ) ayaa simnaar socdey Muddo sedex Malmood ku qabatey Hoyga Nabadda ee Magaalada Muqdisho waxaana loo qabtey Haweenka ku Ganacsada Wadooyinka Muqdisho (Women Streets Vendors) oo tiradooda gaarsey Lixdan Xubnood waxaana looga hadlayey Sidii wax loogu qaban lahaa Haweenka ku Ganacsada Wadooyinka Dhexdooda. Siminaarkaan...
Cali Daahir Muudey “75 sano baan Jiraa intaas oo Abaar baa isoo Marey Weligeey Muqdisho ma Imaan !!
Xarakada Al-Shabaab oo Deegaanka Lambar 50 ka furtey Xero kana qaybisey Raashin Isla markaana Dadka Abaarta u dhistey Teedhooyin Waxaa Magaaloyinka waaweyn ee Soomaaliya iyo Xuduudaha Itoobiya iyo Kenya ku qulqulaya dad ka soo barakacay Abaaro baaxad weyn oo ka dilaacay qaar ka mid ah Gobalada Soomaaliya kadib markii xiliyadii Roobka ee sanooyinkii la soo dhaafay ay meesha ka baxeen, waxayna dadkaasi...
Bayaan ay beesha Cali Saleebaan Kasoo saareen Gobolka bari gaar ahaan Degmada Carmo.
Shir ay isugu yimaadeen degmada Carmo Tariikhdu markay ahayd 7/8/2011 Isimada, Nabadoonada, Ganacsatada, Aqoonyahannada, Culimaa’diinka iyo bulsha weynta Beehala Cali salebaan. Shirkaas oo lagaga wada hadlayey Nabadda iyo Horumarka Puntland, wada hadal dheer iyo falanqayn ka dib waxay beeluhu go’aansadeen Arrimaha soo socda:- in ay beeluhu ka shaqeeyan Nabadda iyo horumarka in ...
Warbixin ku saabsan kulamada wefdigii Talyaaniga ee maanta Muqdisho yimid iyo goobihii ay kormeerka ku tageen.
Wefdi sare oo ka socday dowladda Talyaaniga ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho iyadoo ay kulamo la qaateen madaxda ugu sareysa Dowladda waxayna sidoo kale kormeer ku tageen Xaruntii Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo ku taala KM5 Degmada Hodon.Wefdigan oo uu hor kacayay Wasiiru dowlaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda Talyaaniga Mudane Alfredo Mantica ayaa waxaa kaloo xubno ka ahaa Safiirka Dowladda...